के तपाईंको जीवनबाट सेक्स गायब भइरहेको छ ? – Apan Dainik
अपन दैनिक न्युज डेस्क Follow on Twitter २०७८ आश्विन ३ गते आईतवार १५:०३
यदि तपाईं घर, करियर, बच्चाको योजना गर्नुहुन्छ भने सेक्सको योजना किन बनाउनुहुन्न ?
एकै छत मुनी सँगै बस्दा यति तपाईं सेक्सलेस म्यारिजमा बस्नुहुन्छ भने यो खतराको घन्टी हो ।
यदि एकजनाको यौनइच्छा बाहिर पूरा भइरहेको छ भने अर्को पार्टनर सेक्सलेज म्यारिज झेल्छन् ।
यदि तपाईं पछिल्लो दुई वर्षदेखि यौनबिनाको वैवाहिक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले साधारण यौनजीवनका लागि असाध्यै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरुमा जोडीलाई थाहा नै हुँदैन कि उनीहरुको यौनबिनाको वैवाहिक सम्बन्ध कति खतरनाक हुनसक्छ तर कतिपय अवस्थामा स्थिति यति मुश्किल हुन्छ कि निकै ढिला भइसक्छ ।
भारतका हार्ट टु हार्ट काउन्सिलिङ सेन्टरका वरिष्ठ कन्सलिटङ रिलेशनशिप काउन्सलर प्राध्यापक डाक्टर राजन भोसले सेक्सलेस म्यारिजका तीन प्रमुख कारण बताउँछन् ।
उनका अनुसार यसमा सबैभन्दा प्रमुख भनेको समयको कमी हो । ‘धेरैजसो कामकाजी जोडी चाहँदा चाहँदै पनि यौन जीवनमा रमाउन सकिरहेका हुँदैनन् । उनीहरु आफ्नो करियरमा यति व्यस्त हुन्छन् कि उनीहरुको जीवनबाट सेक्स गायब हुन थाल्छ र स्थिति पछि गएर स्वास्थ्य समस्यामा परिणत हुने गर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सेक्सका लागि समय छैनः
यौनबिनाको वैवाहिक जीवनका कारण र त्यसबाट बच्ने उपायबारे कुराकानी गर्दै डा. भोसले भन्छन्, ‘सेक्सका लागि समय, मूड, फुर्सद, माहौलको आवश्यकता हुन्छ जुन आजको जोडीमा हुँदैन । आजकाल धेरैजसो श्रीमान् श्रीमती दुबै कामकाजी हुन्छन् र दुबैको महत्वाकांक्षा ठूला हुन्छन्, त्यसैले दुबै आफ्नो करियरमा यति धेरै समय र ऊर्जा खर्च गर्छन् कि उनीहरुका लागि यौनका लागि न समय बाँकी हुन्छ न नै ऊर्जा । दुबैको राम्रो कमाई छ, जसमार्फत् उनीहरु घरका सबै सुख–सुविधा जुटाउन सक्छन् तर उनीहरुको जीवनमा यौन भने हुँदैन । घर फर्किसकेपछि पनि उनीहरु अफिसको काममा व्यस्त हुन्छन् जसका कारण उनीहरुको सम्बन्धमा सेक्स नगर्ने बानी विकास हुन्छ र उनीहरुलाई यसको इच्छा पनि हुँदैन । बच्चा कसले सम्हाल्ला भनेर उनीहरु बच्चाको योजना पनि बनाउँदैनन् ।
स्वास्थ्य स्थिति परिवर्तन भइरहेको छः
व्यस्त जीवनशैलीका कारण फास्ट फूड र अस्वस्थकर खानाको ट्रेन्ड बढिरहेको छ । मानिसहरुको सुत्ने–उठ्ने समय निश्चित छैन, कामका लागि उनीहरु यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, रक्सी चुरोटको लत, यी सबैले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छन् र यौन जीवनमा पनि किनभने निरोगी शरीरलाई स्वस्थ सेक्स पहिलो आवश्यकता हो । जीवनशैली सम्बन्धि रोगले पनि यौन जीवनलाई अस्वस्थकर बनाइरहेका छन् । जसलाई मधुमेह छ, उनीहरुलाई यौनका लागि उत्तेजना हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको यौन जीवन कसरी राम्रो हुनसक्ला ? यस्तो काउन्सलर वा डाक्टरको मद्दत लिन सकिन्छ ।
जब एक पार्टनर सेक्सलेस म्यारिजमा हुन्छन्ः
जब एक पार्टनरको विवाहेत्तर सम्बन्ध चलिरहेको हुन्छ तब उनले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा ध्यान दिँदैन र अर्को पार्टनर नचाहँदा नचाहँदै पनि सेक्सलेस म्यारिज झेलिरहेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा पार्टनरको धेरै हानी भइरहेको हुन्छ किनभने अर्कोको त आवश्यकता घर बाहिर पूरा भइरहेको हुन्छ । यो स्थिति बढी भयानक हुन्छ किनभने यसबारे थाहा भएपछि विश्वास टुट्ट र सम्बन्ध पनि ।
सेक्सलेस म्यारिजबाट बच्न सहज छः
पहिलाको तुलनामा अब सेक्सलेस म्यारिज बढी देख्ने गरिन्छ । पहिला पुरुष व्यस्त हुने गर्दथे तर महिला घरमा नै हुन्थे र पुरुषको ऊर्जा प्रत्येक समय उपलब्ध हुने गर्दथ्यो तर अब स्थिति यस्तो छैन । अब महिला पुरुषभन्दा बढी व्यस्त भएका छन् । उनीहरु घर–अफिस दुबै सम्हालिरहेका छन् त्यसैले अब तपाईंले सेक्सलेस म्यारिजबाट बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
– जसरी तपाईं करियरमा अघि बढ्नका लागि लगातार मिहिनेत गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईं शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसै गरी सेक्सलेस म्यारिजबाट बच्नका लागि पनि लगातार कोसिसको आवश्यकता पर्छ ।
– फोन वा सोसल साइट्समा धेरै समय बिताउनुको साटो यो समय पार्टनरलाई दिन सकिन्छ ।
– राती थाक्नुभएको छ भने बिहान चाँडै उठेर यौनसम्बन्धको योजना बनाउन सकिन्छ ।
– यदि हप्ताभरी व्यस्त भइन्छ भने विकेन्डमा सेक्सका लागि समय निकाल्न सकिन्छ ।
– महिनामा एकपटक विकेन्ड ट्रिपको योजना बनाउन सकिन्छ जहाँ कसैले तपाईंलाई डिस्टर्ब नगरोस् र तपाईंले आफ्नो पूरा समय एक–अर्कालाई दिन सक्नुहोस् ।
– यदि तपाईं एक–दुई वर्षदेखि सेक्सलेस म्यारिजमा हुनुहुनछ भने काउन्सलर वा डाक्टरको सहयोग लिनुहोस् किनभने सेक्सको विषयमा ढिला हुनुभन्दा अघि नै सम्हालिनु एकमात्र विकल्प हो नभए तपाईंको सम्बन्धबाट सेक्य गायब हुनेछ ।
#स्वास्थ्य जीवनशैली यौन यौनजीवन सेक्स
२०७८ कार्तिक ५ गते शुक्रबार १३:३९
विश्वमा ८१ करोड मान्छे भोकै सुत्छन्, त्यसमा ६० प्रतिशत महिला
२०७८ आश्विन ३० गते शनिबार १३:०३
गर्भधानको योजना बनाएर परामर्श लिन आउनेको संख्या बढ्यो- डा. जागेश्वर गौतम
२०७८ आश्विन ३० गते शनिबार १२:२३
सेक्सका बेला गरिने ‘स्टेल्थिङ’ के हो ? कतिपय देशमा यसलाई किन बलात्कार मानिन्छ ?
२०७८ आश्विन २७ गते बुधबार १५:३१
सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष
२०७८ आश्विन १७ गते आईतवार १५:५४